Semalt - Alefaso amin'ny Google Analytics ny tsipika fanovàna
Ny fahatakarana sy ny famakafakana ny toerana misy ny fifamoivoizanao dia tena manan-danja tokoa rehefa mijery fikarohana fikarohana. Amin'ny maha-tompon'ny tranonkala azy, manan-danja ihany koa ny mandika ny Google Analytics mba hisorohana ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy ara-dalàna. Ireo tompona orinasa madinika dia nanangana olana mikasika ny spam fanondroana diso, olana goavana iray izay nanimba ireo mpandraharaha an-tserasera.
Amin'ny maha-tompon'ny tranonkala e-commerce, Google Analytics dia fitaovana tokony hampiasainao mandrakariva. Ny Google Analytics dia manome hery ireo mpividy mba handinihana sy handinihana ny tatitra avy amin'ny GA. Ny webmasters sy ny orinasam-pikarohana fikarohana dia mino fa ny olana ara-pitenenana sy ny fifamoivoizana tsy ilaina dia ny olana tokony hotsaraina.
Nik Chaykovskiy, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt Digital Services, dia mijery ny teknika izay miasa amin'ny fanivànana spam referansy sy ny spam fo (GA).
Spam blocking blocker
Ity dia iray amin'ireo karazana WordPress plugins izay miasa mba hanova ny adiresy spam sy bots mba hanakanana azy ireo tsy hikirakirana ao amin'ny tranonkalanao. Eo am-piandrasana, ny fanakanana spam sandoka avy amin'ny Google Analytics dia miafara amin'ny fiarovana ny angon-drakitrao amin'ny tsy fisiana.
Ny fitaovana SpamScape
SpamScape dia fitaovana fanadiovana karazana fitadiavam-bola izay novolavolaina hanodinana ny fifamoivoizana, ny bots, ary ny spam. Ny fitaovana dia hiasa amin'ny famoahana antontan'isa momba ny fitrandrahana auto-generated.
Inona no tokony ho fantatrao momba ny spam referral
Ny spam referrer dia miasa amin'ny fisiahana ny fifamoivoizanao ary mahatonga azy ho toy ny tena izy. Ny mpitsikilo sy ny mpanafika dia manararaotra ireo mpitsidika mba handefa pejin-dresaka amin'ny pejy maloto sy tranonkala. fanontana marobe, izay ahitan'ny URL miovaova amin'ny data Google Analytics.
Ny fiantraikan'ny bots amin'ny tatitra GA
Mampiasa andian-tsarimihetsika handikana tranonkala ny motera fikarohana Google. Na izany aza, dia azo ampiasaina amin'ny sora-baventy toy ny fampielezana ny malware, fampitomboana fifamoivoizana sandoka amin'ny tranonkala iray, ary manaparitaka ny adiresy mailaka ao amin'ny aterineto.
Fantatra amin'ny fananganana spam-fo, spam referral, ary mailaka ny spambots. Araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana IT, ny spam referral dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny firaketana ny fiovan'ny toetr'andro, ny tatitra momba ny fikajiana GA, ary ny fiantraikan'ny fifamoivoizana any amin'ny tranonkala. Na dia izany aza, Google dia miasa amin'ny spam sandoka sy ny tranonkala referrer raha nampidiriny ny torolàlana momba ny hoe mety ho nesorina amin'ny Google Analytics ny 'bots and spiders known'
Ny tokony ho fantatrao momba ny fifamoivoizana ara-pananahana
Ny fizotry ny fifamoivoizana Ghost Ghost noho ny fiantraikany amin'ny angona ao amin'ny Google Analytics fa tsy mahatratra ny tranokalanao. Raha ny marina, ny bots dia tena samy hafa amin'ny fifamoivoizana ara-pananahana. Ny fifamoivoizana an-tserasera dia mandefa tranga sandoka ary manilika ny fikarohanao organika ao amin'ny Google Analytics.
Ny fiantraikan'ny spam sy ny spam foo dia misy fiantraikany amin'ny fampielezan-kevitra SEO anao
Ny fanavaozana ny spam dia manome fanamby goavana ho an'ny tranokala e-commerce sy mpanentana ara-barotra amin'ny SEO. Ny hosoka sandoka dia misy fiantraikany amin'ny angon-drakitra Google Analytics, ka mahatonga ireo tompona entana hanatanteraka asa izay manimba ny fampielezan-keviny. Fitsipika mainty hoditra SEO no ampiasaina ho fehin-kibo mba hahazoana filaharana amin'ny spammers.
Amin'izao fotoana izao, ny spam referral dia ampiasaina hanimba ireo tranonkala mahomby ao amin'ny indostriam-barotra amin'ny alàlan'ny fandefasana ny fifamoivoizana tsy fantatra amin'ny tranokala. Na izany aza, tsy azo atao ny manara-maso ny spam referral satria misy ny malware sy virosy avo lenta.
Ny spam referans, ny sandoka sandoka, ary ny fifamoivoizana bot dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny tranokala sy tranonkala tsy voafetra. Mba hiarovana ny tranonkalanao e-commerce tsy misy fiantraikany amin'ny spam fo, dia ahitsio ny plugins, ny rindrambaiko, ary ny servero eo amin'ny habaka. Miezaha ho mailo foana amin'ny hoe iza no miara-miasa aminao mba tsy hiditra amin'ny mpamono, spammers, ary spam refer1 Source .